IDuke University i-GPA, i-SAT, kunye ne-ACT izikolo zeNgeniso
Funda ngeDuke kunye ne-GPA, izikolo ze-SAT kunye NOMSEBENZI izikolo eziya kufuneka uzenze
IYunivesithi yaseDuke, ngezinga le-11% lokumkela ngo-2016, linye yeyunivesithi ekhethwa kakhulu kwilizwe. Abafakizicelo abaphumeleleyo baya kufuna iimvavanyo kunye nokulinganiswa kovavanyo olumgangatho ophezulu ngaphezu komyinge, izakhono zokubhala ezinamandla, kunye nokubandakanyeka kokubambisana kwangaphandle. Ukongeza kokungenisa isicelo, abafundi baya kufuneka bathumele kumanqaku avela kwi-SAT okanye UMTHETHO, iingcebiso zothisha ababini, kunye nokubhala esikolweni esiphakeme.
Kutheni Unokucinga ngeYunivesithi yaseDuke
Efumaneka eDurham, eNorth Carolina, iDuke enye yeyunivesithi ehloniphekileyo neyokukhuphisana. UDuke uyingxenye ye "ngxantathu yophando" kunye ne- UNC-Chapel Hill neNorth Carolina State University eRaleigh. Ummandla unamaxinzelelo aphezulu kwi-PhD kunye ne-MDs kwihlabathi.
Ngenxa yokuba iDuke ikhetha kakhulu, ine-donow eyininzi yezigidigidi zeedola, kwaye likhaya kwiindawo ezininzi zophando, ngokuqhubekayo kulungelelaniso lwesizwe. Akumangalisi ukuba iDuke yenza iintlobo zeeyunivesithi eziphezulu zelizwe , iikholeji eziphezulu nakumazantsi-mpuma , kunye neeNkovesi zaseNorth Carolina eziphezulu . Iyunivesithi iphinde ilungu le- Phi Beta Kappa kuba ngaba lizininzi zamandla kwezobugcisa be-liberal. Ngaphambili kwezemidlalo, uDuke uyancintisana kwiNkomfa ye- Atlantic Coast (ACC) .
IDuke University i-GPA, iSAT kunye ne-ACT Graph
I-Duke University GPA, izikolo ze-SAT kunye noMTHETHO Ukwazisa ukuba kwamkelwe. Jonga i-graph time-time kwaye ubale amathuba akho okungena kwiCappex.
Ingxoxo kwiMigangatho ye-Admissions yeYunivesithi yaseDuke
Kwigrafu apha ngasentla, amachaphaza ahlaza okwesibhakabhaka kunye aluhlaza abamele abafundi abamkelweyo agxininiswe kwinqona eliphezulu eliphezulu. Abaninzi abafundi abaye bangena kwiDuke babenamaGPA kwi-"A" (ngo-3.7 ukuya ku-4.0), izikolo ze-SAT (RW + M) ngaphezulu kwe-1250, kunye nemigangatho eyenziwa yi-ACT engaphezu kwe-27. Ukuhlolwa kwamanani angaphezulu kwezi ndawo eziphantsi kuzakuphucula amathuba akho ngokulinganayo .
Kwakhona, qaphela ukuba amaninzi amachashazi abomvu ayafihla phantsi kwebala elihlaza okwesibhakabhaka neluhlaza (jonga igrafu engezantsi). Abafundi abaninzi abane-4.0 GPA kunye namanqaku omgangatho ophezulu kakhulu wokuvavanya athathwe kwiDuke. Ngenxa yeso sizathu, kufuneka uqwalasele isikolo esikhethiweyo njengeDuke ukuba sifikelele kwisikolo nokuba ngaba ama-grade akho kunye namanqaku okuvavanya ekujoliswe kuwo.
Ngexesha elifanayo, gcinani engqondweni ukuba iDuke iyakwamkelwa ngokupheleleyo . Abantu abamkelekileyo beDuke bafuna abafundi abaza kuzisa ngaphezu kwamabakala amahle kunye namanqaku okuvavanya asemgangathweni kwi-campus yabo. Abafundi abonisa uhlobo oluthile lwe talente ephawulekayo okanye ibali eliphosakeleyo ukulixelela liya kubakho ukujonga ngokukhawuleza nokuba ngaba amabala kunye neemvavanyo zokuvavanya azange zifikelele.
Ukuze ufunde kabanzi malunga neYunivesithi yaseDuke, i-GPA esikolweni esiphakamileyo, izikolo ze-SAT, kunye nemivuzo ye-ACT, qi niseka ukuba ukhangele iprofayili ye-Duke University.
I-Duke University Acceptance Rate: iipesenti ezili-11
SAT Ukufunda okubalulekileyo: 680/770
ISAT Math: 700/800
UMTHETHO WOMTHETHO: 31/34
UMSEBENZI IsiNgesi: 32/35
UkuLawulwa kunye neData loLondolozo lweDuke University
UkuLawulwa kunye neData loLondolozo lweDuke University. Iinkcukacha ngokukhawuleza zeCapepex
Xa ukhangela igrafu phezulu kweli nqaku, unokugqiba ukuba "i-A" yamanqaku aphezulu kunye nee-SAT aphezulu kukunika ithuba elihle lokungena kwiYunivesithi yaseDuke. Xa sithatha amanqaku e-data ukwamukelwa, kunjalo, sinokubona ukuba abaninzi abafundi abanamandla kakhulu abazange bavunyelwe.
Izizathu zokubangela ukuba umfundi oqinileyo anqatshelwe iinjongo ezininzi: isicatshulwa esisisigxina sesicelo kunye / okanye izincoko ezongezelelweyo; iileta zengcebiso eziphakamisa ukukhathazeka (iDuke idinga iileta ezimbini kunye nesinconyiso somcebisi); i- interview ye- alumni engenabuthathaka (qaphela ukuba udliwano-ndlebe alufunwa kubo bonke abafake izicelo); ukuhluleka ukuthatha izifundo ezinzima kakhulu (njenge-IB, i-AP, ne-Honors); ukungabikho kobunzulu kunye nokufezekiswa kwinqanaba langaphambili; kwaye nangokunjalo.
Kwakhona, unokuphucula amathuba akho avunyelwe ukuba ubonisa ukukhanya kwekhono lobugcisa kwizongezelelo zobungcali, kwaye ngokufaka isicelo kwisigqibo seyunivesiti (yenza oku kuphela ukuba u-100% uqinisekisile ukuba iDuke iyisesikolweni sakho sokuqala esikhethiweyo).
Ulwazi olungaphezulu lweYunivesithi yeDuke
I-Duke inezibonelelo zemali ukubonelela ngoncedo oluncedo lwabafundi abafanelekayo. Uya kufumanisa ukuba iyunivesiti iyavuma abafundi abalungiselelwe kakuhle kwaye, ngenxa yoko, inokugcinwa okuphezulu kunye namazinga okuphumelela.
Ubhaliso lwabonke: 15,735 (aba-6609 abaphumelele phantsi)
Imfundo kunye neMali: $ 51,265
Iincwadi: $ 1,260 ( kutheni uninzi? )
Igumbi neBhodi: $ 14,438
Ezinye iindleko: $ 2,206
Iindleko ezipheleleyo: $ 69,169
I-Duke Financial Aid (2015 - 16)
Ipesenti yabafundi abatsha abafumana uncedo: ama-63 ekhulwini
Izibonelelo: iipesenti ezingama-45
Imali: iipesenti ezingama-39
Izibonelelo: $ 47,055
Imali: $ 6,167
I-Popular Majors: I- Biology, i-Biomedical Engineering, i-Economics, isiNgesi, iNzululwazi yezobupolitika, i-Psychology, iPublic Policy
Ireyithi yokuQinyezelwa kweNyaka eyi-4: ama-86 ekhulwini
Ireyithi yoNyaka weeNgqesho ze-6: iipesenti ezingama-95
Ezemidlalo zaMadoda: Ibhola, i-Tennis, Ukulwa, iBhola yeBhola, uNgcingo, Umkhondo, kunye neNgingqi, Izwe eliphambanayo, iGalofu, iLasrosse, iConcer, Ukubhukuda nokuDaza
Ezemidlalo zaBasetyhini: Umkhondo kunye neNdawo, iLacrosse, ukuHlaba, iChola, iVolleyball, iTennis, iBhola yeBhola, ukuBhukuda kunye nokuDoba, iHockey yeHlabathi, iLizwe eliPhambukayo, iFencing
NjengoDuke University? Emva koko Hlola ezinye iiyunivesithi eziphezulu
Ukuba ungumtshutshisi omkhulu weYunivesithi yaseDuke, unokuthanda amanye amanyunivesithi akhuphisanayo e-Middle Atlantic njenge- Vanderbilt University , iYunivesithi yaseGeorgetown, iYunivesithi yase- Wake Forest kunye ne- University yase-Emory . I-Wake yeHlabathi inokuzikhethela kakhulu kubafundi abanerekhodi elihle kakhulu lemfundo kodwa amanqaku angaphantsi-asemgangathweni-asemgangathweni-izikolo ziyavavanya-ezikhethiweyo.
Ukuba uvulekile ukuya kwikholeji naphi na, unokufuna ukujonga kwakhona kwizikolo ze- Ivy League , iYunivesithi yaseWashington , iYunivithi yaseStford , neYunivesithi yaseCalifornia eBerkeley . Khawukhumbule ukukhetha izikolo ezimbalwa kunye nokukhuseleko.
> Umthombo Weenkcukacha: Iigrafu ngokukhawuleza zeCappex; zonke ezinye iinkcukacha ezivela kwiziko leSizwe leeNkcukacha zezeMfundo
IYunivesithi yaseAlabama GPA, SAT, kunye ne-ACT Data
UWilhelm Reich kunye ne-Orgone Accumulator